Qaranka Sweden oo ka qayb galaya ciyaaraha Olympic Games - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Olivia Schough satte 1-1 till Sverige. sawir: Jonas Ekströmer/TT
Qaranka Sweden oo ka qayb galaya ciyaaraha Olympic Games
La daabacay torsdag 10 mars 2016 kl 10.54
Kooxda dumarka kubadda cagta ee qaranka Sweden ayaa xalay u xaqiiqoodey ka qayb galka tartanka ciyaaraha Olympic oo xagaaga lagu qabanayo Rio de Janeiro, Brazil.
Waxay xaqiiqowday kadib ciyaar xaraarad leh oo dhexmartay gabdhaha kubadda cagta qaranka Sweden iyo kuwa dalka Holland. Laacibad Olivi Schough ayaa ciyaartaan halyey ka noqotay kadib markii ciyaarta bareejo 1-1 ka dhigtay.
– Waxay aheyd markii ugu farxadda badneyd intaan ciyaaraha ku jiray. Weligey ma ciyaarin ciyaar sidaan oo kale muhiim u ah oo aan hadana ka dhaliyo gool sidaa muhim u ah, ayey tiri Schough oo u warameysay Radiosporten.
Ciyaartan labada dal dhexmartay ayaa lagu tartamayey cidda heleysa booska ugu denbeeyey ee ka qayb galka ciyaaraha fudud ee Olympic Games 2016. Sharuudahana way iska cadaayeen, haddii ciyaarta barbar-dhac ku dhamaato Sweden ayaa heleysa booska ugu denbeeya ee ciyaaraha Olympic. Laakiin markii ciyaarta billaamatayba niyadjab ayaa ku habsaday Sweden, shantii daqiiqo oo ugu horeyseyba waxaa gool dhaliyey kooxda Holland ayna u dhalisay ciyaaryahanad Vivianne Miedema.
Qaybta hore ee ciiyaarta kooxda Sweden waxaa ka muuqday welwel iyo in aysan iska caabin awoodin. Laakiin inta qaybta hore ee ciyaarta aysan dhamaanin Olivia Schough ayaa u bareejeysay Sweden. Banooni habow ah oo ka soo dhumay kooxda Holland ayey meel cidlo ah ka heshay taas oo keentay ciyaarto in ku dhamaato 1-1.